Doorasho Biri Ka Dhaceysa Magaalada Muqdisho. – Hornafrik Media Network
Doorasho Biri Ka Dhaceysa Magaalada Muqdisho.
By HornAfrik	 On Feb 23, 2018
Muqdisho-Hornafrik-Magaalada Muqdisho Berri oo Sabti ah waxaa ka dhaceysa doorashada kursi ka banaan Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Somaliya, Sida ay horay ushaaciyeen Guddiga Madaxa Banaan ee Doorashooyinka.
Kursigan oo ay leedahay beesha Samaroon (Gadabuursi) ayaa ah kuwa Xildhibaanadiisa ay ka soo galaan deegaanada Somaliland, Waxeyna doorashadooda ka dhacdaa Magaalada Muqdisho.
Waxaa 13-Kii February Sanadii hore ee 2017 ka geeriyooday Allaha unaxariistee Xildhibaan Siciid Xasan Geeddi oo mudo ka soo mid ahaa Baarlamaanka Somaliya.
Marxuumka ayaa ku geeriyooday Isbitaalka Digfeer, Isagoo Xanuun uga maqnaa doorashadii uu ku guuleystay Madaxweyne Farmaajo.
Doorashadan sida qorshuhu yahay waxaa ku tartamaya laba Musharax oo mid kamid ah uu yahay Wiil uu dhalay Marxuumka kursigan ka geeriyooday.
Fatxi Siciid Xasan geedi ayaa waxaa la tartamaya Musharax kale, Waxeyna ubadantahay inuu kurisgaas ku geeleysan doono Fatxi oo waxaa hadaba Baraha Bulshada lagu sii qorayaa Fariimo loogu sii hanbalyeynayo.
Guddiga Madaxa Banaan ee doorahooyinka ayaa diiwaan galiyay ergada 51 ah ee dooraneysa kursigan, waxeyna usameeyeen aqoonsiyo, iyadoo la siiyay Jadwalka doorahsada berri dheceyso.
Golaha Shacabka oo markii hore ay ka banaanaayeen 4 Kursi ayaa waxaa haatan la buuxiyay laba Kursi oo doorashooyinkooda sanadan ka kala dheceen Magaalooyinka Jowhar iyo kismaayo, halka mida Somailland berri ay ka dhaceyso Muqdisho, waxaana harsanaanaya oo kaliya Kursiga uu ka geeriyooday Alle ha unaxariistee marxuum bootaan Ciise Caalim.
Saraakiisha Xooga oo sheegay in Saldhigyo Shabaab ah ku bur-buriyeen Gedo.